Inona no antenaintsika amin'ny iOS 8 manaraka? | Vaovao IPhone
Vaovao IPad | | iOS, iOS 8, iPad
Roa volana sisa tavela amin'ny WWDC14 manaraka, iray amin'ireo hetsika lehibe indrindra eto amin'ny tontolon'ny Apple, hetsika izay ahitantsika vaovao mahaliana (antenaina) toy ny iOS 8 manaraka, Ny rafitra fikirakirana fitaovana finday ao Apple. IOS 8 izay tokony hahagaga antsika toy ny nataon'ny iOS 7, na dia tsy mino aho fa mitondra zava-baovao lehibe toy ny famolavolana ny iOS7.
IOS 8 izay misy zavatra na hafa efa mivoaka, zavatra izay raha ny fahitako azy dia tsy tsara mihitsy hatramin'izay avy eo hitantsika fa azo vinavinaina sy mankaleo i Keynote toy ireo farany natao. Na izany aza, amin'izao fotoana izao dia sarotra be ny misoroka ireo fivoahana ireo satria mora ny mampandeha ny fampahalalana amin'ny alàlan'ny tambajotra. Manaraka izany dia ho hitantsika ny sasany amin'ireo zava-baovao mety amin'ny iOS 8, ary izay antenaintsika amin'ity rafitra fiasa vaovao ity.
Araka ny lazaintsika, iOS 8 no homogenization ny endrika naroson'i Jony Ive ho an'ny iOS 7Efa hitantsika ny fomba fampifanarahana ny fampiharana rehetra (saika) amin'ity famolavolana vaovao ity ary ny iOS 8 manaraka dia hanaraka azy. Izay ho hitantsika dia ho fampiharana vaovao, serivisy ary fanatsarana ny fahombiazana sy fitoniana maro.
1 Boky fahasalamana
5 Mpanonta lahatsoratra sy topi-maso mialoha
7 Amin'ny volana jona bebe kokoa ...
Miresaka araka ny siosion-dresaka isika fa ity tsaho ity dia mihahery sy matanjaka ary azo antoka fa ho tanteraka amin'ny 2 Jona. Izy io no zava-baovao lehibe indrindra amin'ny Apple ary hiditra amin'ny tontolon'ny fahasalamana izany. Healthbook dia hampiasa endri-javatra maro an'ny rindranasan'ireo fitaovantsika ho fanampin'ny fitaovana (tadidio ny chip M7 izay mampiditra ny iPhone 5s) hanomezana antsipiriany maro momba ny fomba fiainantsika sy hanatsara azy io (azo antoka fa misy olona efa mieritreritra ny fampiasana maloto an'ity angon-drakitra ity ).
fampiharana miaraka amin'ny fisehoan'ny Passbook izay afaka miaraka amin'ny, naely koa, iWatch.
Hanana r isikafiraketana ny hetsika nataontsika (izay ahitantsika ny gadona fiainantsika), firaketana ny sakafo (izay hanampiana ny sakafo nohaninay mandritra ny andro), fampiharana izay hampiasa ny famolavolana Passbook mba hahafahantsika mandahatra ny mampiavaka azy.
Azontsika atao koa ny mahita ny tosidrantsika (zavatra iray izay nampidirin'i Samsung ihany koa), ny sakafo mahavelona, ​​ny siramamy ao anaty, ny torimasantsika ora, ny fisefesintsika, ny lanjantsika ary ny fampihetseham-batantsika.
Healthbook dia hampiditra rakitra maika ihany koa, fisie izay ampidirinay ny mombamomba anay manan-danja indrindra hampiasaina vonjy maika (daty nahaterahana, laharana laharana an-tariby amin'ny havana, vondron-dra, lanja, fatra ara-pitsaboana, allergy ...), endri-javatra mahaliana ao amin'ny Healthbook izay hanao ny fitaovantsika ho zava-dehibe indrindra amin'ny toe-javatra maika.
iTunes Radio dia iray amin'ireo zava-baovao natolotry ny iOs 7, zava-baovao izay mikendry ny hamotika ny tsenan'ny mozika ary ho lasa iray amin'ireo mpitarika amin'ny mozika mivantana. Nandeha tsikelikely io lalana io, saingy mbola mila miparitaka erak'izao tontolo izao izy, zavatra mety ho hitantsika ao amin'ny iOS 8.
Ary koa hatreto iTunes Radio dia ao anatin'ny rindrambaiko Music, ary gaga anay i Apple amin'ny famoronana fampiharana iTunes Radio tokana (zavatra efa nataon'i Apple ohatra tamin'ny app Podcast) izay ahitantsika vaovao hafa.
Avy amin'ny zava-baovao nampidirina tao amin'ny iOS 7 dia miroso amin'ny zava-baovao nampidirina ao amin'ny iOS 6, ny application Maps. Fampiharana izay nihatsara tsikelikely (Tokony hotadidintsika fotsiny ireo sarintany tsy misy dikany izay nanombohan'i Apple ny serivisiny an-tsarintany manokana).
Se manatsara ny marika, ny zotra ary ny fampahalalana momba ny fifamoivoizana sy ny fitaterana. Ho an'ity Apple ity dia efa nanao orinasa fampahalalana fitaterana marobe, noho izany azo antoka fa hahita fanatsarana hafa ao anatin'ny fampiharana isika.
Ny fampiharana hafatra dia ny hatezerana, Betsaka ny orinasa manandrana manala ny WhatsApp ary Apple dia tsy te-hamoy io fotoana io rehefa mandalo ny fotoana tena ratsy indrindra ny WhatsApp (misalasala amin'ny fiarovana anao, ny fividianana Facebook ...).
Apple hanatsara ny lesoka rehetra ato amin'ity rindrambaiko ity, ary mety hanampy ny fikafana ny hafatry ny mpandefa sy ny mpandray ...
Mpanonta lahatsoratra sy topi-maso mialoha
Rindrambaiko fampiharana roa izay tafaporitsaka tao amin'ny pikantsary heverina ho an'ny iOS 8 Springboard. Apple dia afaka mampiditra iray amin'ireo rindranasa be mpampiasa indrindra amin'ny Mac: TextEdit sy Preview.
Amin'ireto fampiharana ireto dia afaka (heverina) jereo sy ovao ireo rakitra izay tazominay ao amin'ny kaonty iCloud anay (izay harahina amin'ny fitaovana Apple rehetra).
Izy ireo izao fampiharana amin'ny fampandrosoana saingy manana bileta maro izy ireo hahitana ny mazava ao amin'ny iOS 8 manaraka. Amin'ireny dia ilaina ny manome lanja ny fampidinana iBooks (hamaky PDF) na Pejy (hanova antontan-taratasy) ho lasa fenitra ao amin'ny iOS 8 ary betsaka kokoa no hampiasaina.
Zava-baovao iray hafa natolotra tao amin'ny iOS 7: CarPlay, ny fifandraisana tonga lafatra eo amin'ny fitaovantsika sy ny fiarantsika. Fitaovana iray ahafahantsika mivezivezy amin'ny alàlan'ny fitaovantsika iOS nefa tsy manadino ny làlana.
Hahafahantsika manana ny GPS an'ny iDevice, ny mozikantsika ary ireo rindranasa maro hafa izay hifanaraka amin'ity CarPlay vaovao ity. CarPlay izay tsy miankina amin'i Apple ihany satria tsy maintsy ampidirin'ny mpanamboatra fiara ao anaty fiara io fampiasa io.
Amin'ny volana jona bebe kokoa ...
maro zava-baovao maro izay hanandraman'i Apple hahagaga antsika ary asaivo mieritreritra izahay fa manana ny rafitra fiasa tsara indrindra ho an'ny finday eny an-tsena, Hifantoka hatrany isika satria maharitra ny fiandrasana ...
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iOS » iOS 8 » Inona no antenaintsika amin'ny iOS 8 manaraka?
Mety ho diso hevitra ny mieritreritra fa mandre hevitra amin'ny mpampiasa tsotra izy ireo, fa inona no hanatsarana ny afovoan'ny fanaraha-maso haingana mba hampihetsika na hampiato ny toerana misy azy sy ny fametahana azy amin'ny tsindry tokana?
Carousel, ilay rindranasa Dropbox vaovao handaminana sary sy horonan-tsary ao anaty rahona
GesturesPlus manatsara ny sarimiaina rehefa manakatona fampiharana (Cydia)